सर्लाहीमा एउटा मोटरसाइकलले एकैपटक पाँच जनालाई ठक्कर दिएको छ । ठक्करले १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन् ।रामप्रवेश मुखियाका १४ बर्षीय छोरा जुगल मुखियाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको सर्लाही प्रहरीका प्रबक्ता मदन कुँवरले जानकारी दिए । यस्तै, ३५ बर्षीय शम्भु मुखिया, २२ बर्षीय श्रवण मुखिया र ३२ बर्षीय देबेन्द्र पासवान घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको बिभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।बरहथवा नगरपालिका ११ दियरमा ना.५२ प ५६४१ नम्बरको मोटरसाइकलले बाटोमा बसिरहेका ५ जनालाई एकैपटक ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाइकल हिरापुरबाट हरकठवातर्फ जाँदै थियो ।
२१ असार २०७७, आईतवार ११:३९
सर्लाहीमा एउटा मोटरसाइकलले एकैपटक पाँच जनालाई ठक्कर दिएको छ । ठक्करले १ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४ जना घाइते भएका छन् ।
रामप्रवेश मुखियाका १४ बर्षीय छोरा जुगल मुखियाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको सर्लाही प्रहरीका प्रबक्ता मदन कुँवरले जानकारी दिए । यस्तै, ३५ बर्षीय शम्भु मुखिया, २२ बर्षीय श्रवण मुखिया र ३२ बर्षीय देबेन्द्र पासवान घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको बिभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
बरहथवा नगरपालिका ११ दियरमा ना.५२ प ५६४१ नम्बरको मोटरसाइकलले बाटोमा बसिरहेका ५ जनालाई एकैपटक ठक्कर दिएको प्रहरीले जनाएको छ । मोटरसाइकल हिरापुरबाट हरकठवातर्फ जाँदै थियो ।
Prevछापावाला र तेजावी सुनबीच ४३५ रुपैयाँ फरक, आज कुनको भाउ कति ?
‘रोगीलाई निरोगी र निरोगीलाई दिर्घजिवी बनाउँछौं’- डा. गैह्रे (भिडियो अन्तर्वार्ता)Next
काठमाडौंबाटै चोरी हुन्छन् दैनिक चार वटा मोटरसाइकल, भेटिने कम